HORTENSIA VANILLA FRAZIA: SAWIRRO, SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN. - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee si habboon u daryeeli kartaa panilla hydrangea vanilla fraze?
Hydrangea Paniculata waxaa markii hore lagu sharraxay filimka Jarmalka ee Philip Franz von Siebold intii uu socday safar 1829-kii. Warshadan weyn waxaa laga heli karaa Japan, Shiinaha iyo Sakhalin oo ku yaalla dhulalka sare iyo dhul-daaqsimeedka heerarka sarreeya ee ka sarreeya 1200 m oo ka sarreysa heerka badda.
Kala sooc Vanille waxay dhaleeceyneysaa argagixisada hydrangea waxaa loo xayiray beerka Faransiiska iyo beeraha Eric Reno kadib 11 sano oo shaqeyn ah oo kala duwan. Kala duwan ayaa si buuxda loo soo saaray 2003 waxaana lagu guulaystay abaalmarino badan oo lagu soo bandhigay Holland. Noocyadaasi waxay u muuqatay inay caan u tahay caan u ah sababta oo ah ubaxyada casaanka-casaanka ah ee casaanka-cadaanka ah iyo caabbinta barafka sare iyo aan qabriga geedka.
Sawir Vanilla Fraze waa hooseeyo dhakhso u koraya oo leh dhexroor ah 1.5-2 mitir. Crohn waxay leedahay qaab asal ah. Ubadka waa weyn oo cufan, pyramidal casaan-caddaan ah midabka iyo dibad ahaanba si la yaab leh u eg oo gees ah barafka vanilla-strawberry. Ubaxyada ubaxyada ubaxyada asal ahaan cad ayaa si tartiib tartiib ah u leexda. Tan iyo markii ubaxyada ubaxyada ubaxyada iyo isbeddelka midab-baddelka, baadiyaha waxay u muuqdaan kuwo aad u xiisa badan, iyagoo ciyaaraya barafka cad oo dhan barafka madow. Caleemaha waa cagaar mugdi ah, adigoo riixaya taabashada, oval-qaabeeya. Ubax dheer laga soo bilaabo dabayaaqadii Julaay illaa September Warshadu waxay leedahay qaab muuqda, waa awood u leh inay u adkeeyaan dhaxan aad u sareeya ilaa 35-38 digrii.
Dhirta yaryar ayaa yarayn kara jiilaalka, laakiin si fudud ayaa loo soo celin karaa guga. Sidaa darteed, in dhaxan daran, waxaa lagu talinayaa in ay daboosho geedka iyo budada dhulka ku leh sida balka.
Ku haboonaanta dhammaan gobollada marka laga reebo kuwa ugu kulul iyo kuwa ugu qalafsan, sida dhirta jecel yahay carrada qoyan iyo hooska qayb ahaan. Sidoo kale, gobollada leh carrada dabiicigu ma shaqeyn doono.
Fasalka Tani waa koray beerta iyo beerta beerta iyo abuurista dayrarka dekada. Waxaad abuuri kartaa qaababka dhirta kale ama si gaar ah loogu beeray.
Warshadu waa mid fudud, laakiin waxay dareemeysaa weyn ee hooska. Beerto waa lagama maarmaan on qorraxda ama dhinaca hooska ee ceelka beerto leh ee dheeriga ah ee peat dhanaan. Vanilla Frize wuxuu jecel yahay bacrin, cadi khafiif ah, oo qoyan oo leh qandho sare leh.
Warshadda laguma dhajin karo carrada oo leh waxyaabo sarreeya oo lime ah. Tani waxay keeni kartaa jirro iyo dhimasho.
Gobollada qaboobaha, soo degitaanka waxaa si fiican loo qabtaa guga. Masaafada u dhaxaysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 1-1, 5 mitir. Ka dib markii laga beerto geedo u baahan tahay biyo badan oo jaban yar. Habka guud ee waraabinta waa mid baqdin leh, gaar ahaan cimilada qalalan. Waxaa haboon in la isticmaalo biyaha roobka la ururiyey. Bacriminta waa lagama maarmaan si loo soo saaro Bacriminta macdanta iyo digada dareere ah labadii usbuucba mar laga bilaabo Abriil ilaa Agoosto. Dharka wanaagsani wuxuu abuuri doonaa xaalado koritaan degdeg ah iyo ubax badan.
Hortensia Vanilla Fraze waxay ku dhufan kartaa adoo qaybsanaya baadiyaha, gooynta iyo dhejinta.
Waayo qabashada dooro qayb ka mid ah asliga ah leh shan ama lix nooduus, oo lagu aaso dhulka qoyan laba noodood. Caleemaha hore waa in la gooyaa. Daboolka ku dabool dabool oo ka dabool qoraxda tooska ah.
Xilliga ugu fiicnaanta ee kala duwanaanshahan kala duwanaanshahan waa mid loogu talagalay Ruushka dhexe laga bilaabo 10 ilaa 15 Juun. Waqtiga dambe, geedka lagama yaabo inuu dego.
Marka uu dhirta koray, waa la faafin karaa kala qaybinta baadiyaha. Waa lagama-maarmaan tahay in si fiican loo kala qaybiyo baadiyaha si aaney u waxyeeleynin nidaamka xididka. Qaybinta baadiyaha waxaa laga samayn karaa laga bilaabo guga ilaa dayrta. Laakiin qaybta dayrta geedo waa in si wanaagsan loo ilaaliyo qabowga.
Cunto-soo-saarka adoo dhajinaya, laan yar oo ku habboon ayaa lafdhabar u ah isla markaana ku dhajiyay meel cusub oo qoto dheer oo ah 15 cm Ka dib markii nidaamka xididku uu abuuray, waxaa laga soocaa warshadda waalidka waxaana laga saaraa meel gooni ah.
Si aan u toosin qulqulka, waa in la hubiyo maro gaar ah. Si loo sii xoojiyo badbaadada meel cusub, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo jeexitaan yar oo ku yaal asliga ah
Gooyo waxaa la sameeyaa guga ka hor bilowga koritaanka firfircoon, ka saara qaboojiyey oo la qalajiyey afkoda.
Dareemidda noocyo kala duwan ayaa leh muhiim ah: qoto dheeraadka ah ee manjooyin, ka badan oo hodanka ah ee inflorescences cusub noqon doonaa. Xilliga dayrta, ka hor inta suunsho, ka saar dhammaan dhammaan inflorescences qalajiyey.
DAREEN. Gooyo lama sameyn karo xilliga socodka qulqulka.
Dhirta ayaa leh mid sare caabbinta barafowga. Gawaarida qubeyska waaweyn ee loo yaqaan "vanilla frilla" waxay u baahan yihiin hoyga oo keliya cimilada qabow oo keliya. In beerta waa in ay ka ilaaliyaan dhirta ka soo barafka saqafka iyo haraaga ka dib markii la nadiifiyo jidadka.
Dhirta yaryar waxay u baahan yihiin hoy adag oo loogu talagalay jiilaalka, waxay u baahan yihiin in si taxadar leh looga ilaaliyo dhadhanka ama cawska qallalan.
Warshadu waa mid u adkaysata cudurada iyo cayayaanka. Cudurada ugu caamsan waa Chlorosis, caarada budada ah iyo aphid cagaar cagaaran.
Chlorosis - Tani waa cudur ay sababto humus xad dhaaf ah ama lime carrada. Cudurkan, caleemaha waxay bilaabaan inay caatoobaan oo ay lumiyaan midabka caadiga ah.
Daaweynta Chlorosis ayaa la sameeyaa xalal gaar ah: nalalka potassium iyo copper sulfate leh bareeg ah 3-4 maalmood.
Kareemada budada ayaa sababeysa qoyaan xad dhaaf ah. Daaweynta, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo qoyaanka hawada, iyo daweeyo caleemaha iyo calsan leh copper sulfate leh saabuun.
Gagaarka caleenta ah ayaa si fiican loo burburiyaa xakamaynta. Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 150 garaam oo toon ah 10 litir oo biyo ah kuna adkeyso laba ama saddex maalmood. Ka dibna ku dar 50 g saabuun oo ku buufin hydrangea 5-6 maalmood.
Qurxinta quruxda badan ee hydrangea Vanilla Fraise waxay noqon doontaa quruxda dhabta ah ee beertaada. Waa arrin aan qabyo ahayn oo leh habboon oo daryeel iyo waraabinta si firfircoon u koraayo iyo sannado badan oo la fadhiisto iyada oo leh quruxda baalal-madow-casaan.
Sawirro intaa ka badan oo ku saabsan gawaarida: